I-hydrogen generator for amalahle izindlu zangasese ngezandla zabo
Eshibhe nendlela ehlanzeke ukufudumeza igumbi nentshisekelo abanikazi eziningi izindlu zangasese. Hydrogen Ukushisa ingenye izixazululo kungenzeka. Ubuchwepheshe obunjalo kungaba okunye iphila izinhlelo yesimanje. Kungenzeka yini ukwakha futhi ufake i-generator hydrogen ukuze amalahle izindlu zangasese ngezandla zabo? Kusho ukuhlelwa enjalo isebenza kanjani? Yini imishini isetshenziswa ngesikhathi ukufakwa? Impendulo yale mibuzo itholakala kulesi sihloko.
Hydrogen - yisona esikhulunywa abantu abaningi chemical izidakamizwa eplanethini yethu. igesi kungenambala eliqukethe akukho ubuthi ukwethula cishe zonke compounds. Ingqikithi sinikezwe izici esiyingqayizivele. Esikhathini hydrogen okuqinile kanye nama-liquid has cishe awekho mass. Usayizi ngama-athomu yayo luncane iqhathaniswa nezinye izakhi zamakhemikhali.
Ingqikithi etholwe ngokuxuba hydrogen ne air ambient isikhathi eside singalondoloza izakhiwo zabo kanti egumbini, kodwa ubuncane emlilweni kungaba qhumisa. Ukuze zokuhamba futhi isitoreji esetshenziswa iziqukathi ekhethekile wadala ngensimbi engagqwali.
Amalahle emizini yabazalwane ne-hydrogen
Extract fuel kungaba elingapheli. Sikwazi ukuthola amanzi anele ethafeni nogesi. amandla Thermal eyakhishwa ngo ukusabela hydrogen nomoya-mpilo, isetshenziselwa Ukushisa izakhiwo.
Ubuchwepheshe yokwenza umoya-mpilo ne-hydrogen - kuyindlela olukhulu ukuze igesi yemvelo. Isilinganiso omlilo lokushisa kungenzeka elilingana 3000 degrees Celsius. Ukuze amelane nesidingo esingaka ephezulu ekhethekile sikaphalafini hydrogen amandla omlilo.
idivayisi okunjalo inezigaba eziningana. Okuhle-hydrogen generator for amalahle izindlu zangasese, sandla inqubo owahlukanisa amanzi phezu izingxenye, ungakwazi babuthane ngokwakho. Ngaphezu kwalokho, yelikhono zisetshenziselwa nokwandisa ukusabela zamakhemikhali. Komsele kusukela generator sikaphalafini adingekayo ukuze kudalwe izulu ilangabi. Kubhayela ingasetshenziswa njengenhlangano abavamile kudivayisi ukushisa-umzimba. Ngo sikaphalafini esithandweni itholakala, unesibopho Ukushisa ohlelweni bafudumale.
Imishini ubudala singafakwa ingashintshwa ukuze asingathe kwamandla e-hydrogen. Etindzabeni tetimali izinqumo ezinjalo ubunjiniyela uzokwamukeleka okuningi uma ziqhathaniswa kwe kubhayela entsha, ekhiqizwa at simila. Kulokhu, i-generator hydrogen for amalahle izindlu zangasese zidinga isikhala esithe xaxa.
Ukuze isetshenziswe esisebenzayo yokusabela lapho hydrogen ne-oksijini ekuqaleni athuthukile amasampula ezimbonini. Ukusebenza kahle esiphezulu izitshalo ezifana kwaba 80%. Ngenxa yalokho kokusebenza kanzima imini yonke yi-onjiniyela ngemva izithuthukisi eziningi, abakhiqizi bakwazi ukuletha emakethe hydrogen isitshalo yokuqala ukusetshenziswa ekhaya.
Ukuze uxhume isidingo ukuhlangabezana ezimeni eziningana. Lokhu kuhlanganisa ukunikezwa uxhumano umthombo ketshezi. amanzi Kufanele abavamile. Umthamo we ukufakwa izonqunywa ukusetshenziswa of izinto zokusetshenziswa. Kudinga uxhumano kagesi namathuba electrolysis. Kuye imodeli kanye namandla kubhayela kunqunywa izinga isenzo kulethe. Isibonelo ukufakwa izinga kuyinto generator hydrogen for amalahle indlu yangasese "Star 1000".
Idivayisi, njengoba kuqhathaniswa kumadivaysi kusetshenziswa fuel okuqinile, kuphephile kakhulu ukusebenzisa. Lokhu kungenxa yokuthi bonke izinqubo ezenzeka ngaphakathi kweyunithi ngokwayo, kodwa ukulawula kuphela ezibukwayo yezinkomba kudingwa abasebenzisi. Ngaso sonke isikhathi kufanele kukhunjulwe ukuthi lokubolekwa self-ezenziwe kungaba avuze fuel ingxube. Kubalulekile ukuhlola yobunzima we esitsheni ngaphambi kokuba kuqalwe zedivayisi.
izici Operational wale mikhiqizo izithakazelo bonkhe batsengi. Ungakha i-generator hydrogen for amalahle izindlu zangasese ngezandla zabo. izibonelo Photo okwethulwa kulesi sihloko.
amadivaysi Homemade kanye ifektri kuhluke kakhulu ngempumelelo. Zilungiselele yokuthi umthamo awo ngeke ukuhlangabezana izilinganiso. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi ukufakwa ehlukile kohlelo hydrogen kumele kwenziwe usebenzisa kubhayela efakazelwe noma generator isitshalo.
Izinzuzo kanye nezincomo
Cabanga omuhle eceleni heater ukuthi ukusebenzisa ku-hydrogen. Kuvele kusale uphethiloli. Ukuze ukugcwaliswa kubhayela kudingeka amanzi plain. Inani eliphansi ugesi ka 0.3 kW / h kumanele operation umthamo evamile 27 kW. Carbon amagesi ukulimaza umzimba, bengekho nhlobo.
Ukuthenga generator hydrogen ekhaya bafudumale, kungcono ukuba ukhethe kubhayela noma ukushisa kudivayisi exchange efanelekayo. ukufaka ezinjalo kudingeka ukusebenza emazingeni okushisa aphakeme zazo safinyelela phakathi amandla omlilo kwamandla e-hydrogen.
Ingxube etholwe ngenxa operation generator ukuze ufake igesi oxyhydrogen. Umuntu angeke alithole ukunquma avuzayo egumbini nephunga. Amazinga ukuthungela kuphezulu kakhulu. Lokhu kusho ukuthi imfuyo inhlekelele. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi yonke imihlangano ezenziwe ekhaya ngaso sonke isikhathi kufanele ihlolwe.
izindleko High kuyisici esiyinhloko nokukhawulela ekukhetheni kulungiselelwa endaweni yokukhanda. Ethandwa kakhulu hydrogen generator Ukushisa izindlu zangasese etholakalayo ruble angu-50 000. Ukubuyiselwa ekwandeni iyunithi kumele kwenziwe kanye ngonyaka. Le mininingwane iyadingeka ukuthuthukisa ikhwalithi kubhayela, ngisho noma akusiyo imboni kulungiselelwa.
Izici eziyinhloko zezitshalo hydrogen
Yiqiniso, kubalulekile ukulandela imithetho yokuphepha. Asikwazi ukukhohlwa ngemiphumela okungenzeka engalawuliwe zamakhemikhali. Ukuze uhlele sangasese endlini Ukushisa hydrogen izandla zami siqu, kudingeka lezi zingxenye, amaphayiphi kanye isibilisi.
Izitshalo angadingi kumadivayisi angeziwe yokususa imikhiqizo amandla omlilo. exotherm kwenzeka ngenxa yokusabela chemical. Uhlelo piping engena umusi ashisayo. Okunjalo Ukushisa izinhlelo kangcono esetshenziselwa amalahle ophahleni, izinhlelo baseboard kanye phansi egumbini.
Yini amapayipi kudingeka?
Ezinconyiwe tube ububanzi 25 kuya kwezingu-32 mm. I ububanzi kufanele lishintshe phezulu kuya phansi ngemva wiring. Le ndlela izonikeza umphumela esiphezulu we Ukushisa izinhlelo.
Hydrogen Energy Amathemba
izindlela zokusebenza athuthukisiwe kakhulu ukwehlisa izindleko ukufaka ezinjalo. Lezi zihlanganisa ubuchwepheshe ugesi ezishibhile noma ngisho free. Ungakhetha yelikhono kangcono zamakhemikhali. Bebelokhu liyaziwa futhi lisetshenziswa izimoto kwamandla e-hydrogen amabhlogo. Kodwa futhi, konke kuncike izindleko eziphakeme ngokwedlulele.
Njengoba baziwa kakhulu yesimanje Welding imishini nge edidiyele hydrogen sikhungo. Izindleko fuel ayibalulekile. Futhi, asikho isidingo sokubhekana nenkinga ye ethutha amasilinda emba eqolo. Yonke kudivayisi kungenziwa kalula afakwe ebhokisini ukukhanya usayizi encane.
Sekuyisikhathi eside i-Science waqhubekela phambili. The kungenzeka ekuthuthukiseni amasu ukuhlela ukuphila isiyatholakala esintwini kunanini ngaphambili. Mane ukuthola ulwazi olufanele. Akuwona wonke izinhlobo zamandla okunye namuhla alethwe ekukhiqizweni. Kodwa lezi ubuchwepheshe kukhona aphansi elula ukuze yimuphi umuntu owayengaphansi kwamandla ukuqoqa generator hydrogen for amalahle indlu yangasese ngezandla zakhe egalaji emzini futhi esetshenziselwa yabo nenhlalakahle.
Nakuba thina bayaqagela ngalokho ubuchwepheshe nobuntu izosebenzisa kusasa. Energy Outlook hydrogen ezisekelwe uhlolwa ubuze ososayensi abaningi ngenxa uhla encane amathuba ukusetshenziswa. Kodwa ungakwazi ukubheka lesi simo ngaphesheya. Uma umuntu ingakha ubuchwepheshe ngokulungiselela ezimpilweni zabo siqu, uxhumana amandla emvelo, njengoba kungenzeka ukulahla kungenzeka yokuthola ukushisa amandla ukuxhumana ugesi namanzi?
Kuwubuwula ukudlula leli thuba. Uma ungakwazi ukuthola indlela ukusisebenzisa ezweni lanamuhla kungase kube ngcono ukuba bacabange ngalokho luni lwezwe sihlose ukwakha? I generator hydrogen for amalahle izindlu zangasese kanye nezinye izindlela zemvelo kuyadingeka ukuthuthukisa nokusebenzisa.
Potato ngezandla zabo. Ikhaya workshop
Indlela yokwenza egqumeni alpine ngezandla zabo: Izincomo
Izwe site: ukuhlobisa kusezandleni zakho ngosizo izimbali fresh
Beya iminyango ngezandla zabo: design, imidwebo, imidwebo, izithombe. Ukushayela esangweni ngokuhambisa ngezandla zakhe ne Ubukhulu
Idivayisi kuyinto amanzi "bukhoma" futhi "ufile" ngezandla. Iinsetjenziswa zokukhwela okwenza amanzi "bukhoma" futhi "ufile" - Photo
MSI N1996: umbadlana ephelele umhlangano computer okusekelwe Socket 754 futhi AMD izilimi
Malia Bay Beach Hotel & Bungalows 3 *: izibuyekezo, izithombe
Isikhungo seVisa saseGreece eYekaterinburg: ikheli kanye nezinombolo zokubhaliswa kwe-visa
Uyini umsebenzi? Yini lokho?
Blouses fashion abesifazane
Voronezh: sezulu, nemithombo, ngemvelo
I-terminology yokuthumela. I-fairway yiyiphi?
Amabhola engilazi omnyaka omusha: izinketho zokuhlobisa imikhosi
Izimpawu nokukholelwa ezeni: kungani izihlathi bashise?
Izinhlobo e visa US: basemazweni okufika futhi okungezona basemazweni okufika isigaba izimvume